Ampinga lehibe vita amin'ny vatan'ny varahina ho an'ny fantsona vy, vy amin'ny paipa vy.
Ny varahina varahina vita amin'ny vy, tariby varahina ary ny fantson'ny vy ao anatin'ny 20 segondra mampiasa ny rafitry ny famerenan'ny tanana vita amin'ny tanana DW-UHF-6KW-III.
DW-UHF-6KW-III rafi-panafody fametrahana induction
• Ny vilia silika amin'ny tariby varahina.
Temperature: 871 ° C (1600 ° F)
Time: 20 seg
• Ny vilia silika amin'ny fantsona vy.
Time: 10 hatramin'ny 11 seg
Atolotry ny fampiasana preforms / perandrama alloy mampandeha fa tsy tsorakazo manelingelina. Io dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa tanana roa mba mitazona ny U-Braze. Manatsara ny kalitaon'ny braze sy famerenam-bola amin'ny alàlan'ny fizarana ny gony isankarazany manodidina ny fiarahana brze isaky ny mandeha.
Rehefa manosihosy varahina amin'ny vy ny varahina dia tsara kokoa ny mandrehitra ny varahina mba tsy hampanan-kapoka ny vony vy satria sarotra kokoa ny hafanana ny varahina.
Sokajy Technologies Tags brazing copper, Fantsona vy matevina, fantsom-bazaha, Fampitafosana tanana, varahina mirehitra varahina, fantsom-bolo vy vita tanana, induction brazing, induction bronze copper tube, fanetren-tànana fihazana Post Fikarohana